Warbaahinta Itoobiya Oo Baahisay Xogo Laga Helay Ninkii Dabka Qabadsiiyay Xafiiska Somaliland Ee Adis-ababa Sheegayna In Hargeysa Laga Mastaafuriyay |
Warbaahinta Itoobiya Oo Baahisay Xogo Laga Helay Ninkii Dabka Qabadsiiyay Xafiiska Somaliland Ee Adis-ababa Sheegayna In Hargeysa Laga Mastaafuriyay
Addis Ababa (GNN)-Wargeyska The reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa, ayaa baahiyay xoggo laga helay nin dhawaan dab qabadsiiyay qaybo ka mid ah xafiiska diblomaasiyadeed ee ay Somaliland ku leedahay magaalada Addis Ababa ee Itoobiya.
Wargeysku, wuxuu sheegay in xoggo uu ka helay saraakiil Booliska ka tirsan oo dhacdadan iyo ninka loo qabtay baadhayay, ay xaqiijiyeen in ninka falka gaystay uu ahaa nin dhawaan laga masaafuriyay Somaliland kaas oo ku dooday in la baro-kiciyay.
Wargeysku wuxuu sheegay in dhacdada oo ay badhayeen Booliska degmada Bole ee Addis Ababa ay xaqiijiyeen in eedaysanuhu uu ka mid ahaa qaxoontiga Itoobiyaanka ah ee degenaa Hargeysa, kaas oo ka mid ahaa dad Hargeysa laga saaray markii ay dhawaan rabshaduhu dhex mareen Soomaalida iyo Oromada.
Wargeysku, isagoo soo xiganaya xogaha uu Booliska ka helay wuxuu yidhi “Eedaysanuhu waa uu qirtay dembiga. Waxa aanu ku andacooday in ay jawaab u tahay barokicintii lagu sameeyey” sidaas ayuu yidhi wargeyska the reporter oo soo xiganaya ilo xogogaala oo Boolis ah.
Ninka ayaa la sheegay inuu dusha uga soo dhacay deyrka xayndaabka u ah xafiiska Somaliland ka dibna uu dab qabadsiiyay, waxaana sidan xaqiijiyay sarkaal ka tirsan Booliska Addis Ababa oo ka gaabsaday in magaciisa la sheego, waxaanu intaas raaciyay in ninkan eedaysanaha ah oo aan weli magaciisa la baahinin uu ciidamada Booliska isu dhiibay ka dib markii uu falka gaystay.
Falkan dabka ah ee lagu waxyeeleeyay xafiiska Somaliland ayaa waxa markiiba ka jawaabay ciidamada damdamiska ee Addis Ababa oo 46 minit gudahood ku damiyay dabkii, waxaana hantida ku khasaartay halkaas lagu qiyaasay lacag gaadhaysa 100,000 oo bir. (Boqol kun oo bir).
Madaxda xafiiska Somaliland ee Addis ababa ayaa waxay iyaguna arrintan dhacday u gudbiyeen markiiba wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya, “Haa waa lanagu soo wargeliyay falkaas.” sidaas waxa yidhi Meles Alem oo ah afhayeenka wasaarada arrimaha dibadda oo u waramay jariiradan, waxaana la xoojiyay ammaanka duleedka xafiiskan safaaradda u ah Somaliland oo aad loo adkeeyay, iyadoo warbixintu sheegtay in la qabtay ilaaliyihii markaas falku dhacay shaqada ku jiray oo markii dambe la sii daayay.
Wakiilka Somaliland ee Itoobiya Cali Salaan Jirde ayaa isna wargeyska u xaqiijiyay dhacdadan, waxase uu ka gaabsaday inuu faahfaahin bixiyo, isagoo sheegay in arrinta lagu hayo baadhis aanu ka hor dhacayn.
Xigasho:— Wargeyska Geeska Afrika